वाम शक्ति केन्द्रमा कांग्रेसका ‘हेभीवेट’ प्रदिप गिरी
3 पटक पढिएको
बाम गठबन्धन र काँग्रेस दुबै पक्ष सशंकित
सिरहा : निकट अतितमा संपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा एमालेको सशक्त उपस्थिति रहेको मानिने सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ वाम गठवन्धन भए पश्चात ‘वाम शक्ति केन्द्रको’ रुपमा चर्चित छ । तत्पश्चात राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थानीय स्तरमा अत्यन्त लोकप्रीय नेता मानिने लगन लाल चौधरी पनि एमालेमा प्रवेश गरेपछि त झन यो निर्वाचन क्षेत्रलाई अजेय दुर्गको रुपमा वाम शक्तिहरुले परिभाषित गर्न थालेका थिए । तर नेपाली कांग्रेसका हेभीवेट मानिने र यसै निर्वाचन क्षेत्रमा जन्मथलो भएका नेता प्रदिप गिरीले यही निर्वाचन क्षेत्रवाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिए पछि अहिले यो निर्वाचन क्षेत्र चर्चाको शिखरमा छ । वाम गठवन्धनका तर्फवाट यस क्षेत्रमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गंगा प्रसाद यादवको उम्मेदवारी परेको छ भने मधेस आन्दोलनको उदगम स्थल मानिने यसै क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फवाट पूर्वविना विभागिय मन्त्री राजलाल यादवको उम्मेदवारी परेको छ ।
विगतमा सधै सिरहाको पश्चिमी क्षेत्र भाग क्षेत्र नंं ४ वाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने प्रदिप गिरी यस पटक भने सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नंं १ मा सरेका छन् । यो क्षेत्र उनको जन्मथलो पनि हो । निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्नुको कारण सोध्दा नेता गिरीले भने मैले ४ नंं वाट उम्मेदवारी दिदा राजपाका केन्द्रीय नेता राजकिशोर यादवलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो । उनले उम्मेदवारी दिने अर्को क्षेत्र नपाउने भए । अन्यत्र कतै उनको प्रभाव भएको क्षेत्र नभएकोले यादवको लागि आफूले ४ नंं क्षेत्र छोडिदिएको बताए ।
तर अर्काको लागि उदारता प्रदर्शन गर्दै निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका नेता गिरी आफू भने वाम भुंग्रोमा जाकिएका छन् । सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नंं १ मा पर्ने लहान नगरपालिका र सखुवा ननकारकट्टी गाउँपालिकामा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन क्षेत्रमा शानदार मत ल्याई विजय प्राप्त गरेको छ । भगवानपुर गाउँपालिकामा फोरमले जिते पनि लगभग २ सय मतले मात्र एमाले पराजित भएको थियो । २ गाउँपालिका र लहान नगरपालिकाको एमालेको मत हेर्दा एक्लो एमालेलाई पनि यस क्षेत्रमा पछार्न कठिन देखिन्छ । त्यसमाथि वाम गठवन्धनले गर्दा माओवादी केन्द्रको पनि मत थपिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भए पनि माओवादी केन्द्रले यस क्षेत्रमा सम्मानजनक मत ल्याएको थियो ।
एमाले र एमाओवादी दुवै मत खप्टिदा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको ल्याएको मत भन्दा वाम पक्षको मत झण्डै दोव्वरको हाराहारीमा पुग्छ । त्यसमाथी राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा लहानमा अति लोकप्रीय मानिने नेता लगन लाल चौधरी हजारौ कार्यकर्ता सहित एमालेमा प्रवेश गरी प्रदेश सभाका लागि क क्षेत्रवाट वाम उम्मेदवार पनि भएका छन् । नेता चौधरीले गत महिना संपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लहान नगरपालिकामा मेयर पदमा राप्रपाका तर्फवाट उम्मेदवारी दिएका थिए र ४ हजार भन्दा अधिक मत ल्याएका थिए । नेता चौधरीको लोकप्रीयताले थप्ने मत समेत जोडदा कांग्रेस नेता प्रदिप गिरीको लागि उचालि नसक्नुको भारी हुने एकथरी विश्लेषकहरु बताउँछन् । गत संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाले एक्लैले यस क्षेत्रमा विजयश्री लाई चुमेर रामचन्द्र यादव सभासद भएका थिए ।
यो कुरा नेपाली कांग्रेस र स्वयं प्रदिप गिरीलाई पनि अनुभुति भएको छ । त्यसकारण उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन अन्तिम क्षणसम्म पनि संघीय समाजवादी फोरमसंग उनले तालमेल गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरे । सिरहाको क्षेत्र नंं. १ प्रदिप गिरीको लागि छाडिदिए कांग्रेसले सिरहाको बाँकी ३ क्षेत्रवाट उम्मेदवारी फिर्ता लिई संघीय समाजवादी फोरम र राजपालाई सघाउन पनि तयार भयो । कांग्रेसका उम्मेदवारहरु उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्वाचन कार्यालयसम्म पुगे तर नेता गिरीको लागि दुर्भाग्य भयो । सिरहा क्षेत्र नंं १ मा संघीय समाजवादी फोरमवाट उम्मेदवारी दिएका राजलाल यादवले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानेनन् ।
नेता राजलाल यादवलाई मनाउन उनको पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उनको घरसम्म पुगे तर केन्द्रीय अध्यक्षको अनुरोधलाइृ पनि टेरेनन् राजलाल यादवले । अन्तत कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु विच स्थानीय स्तरमा तालमेलको लागि गरिएको प्रयास विफल भयो र प्रदिप गिरीको लागि निर्वाचन अव फलामको च्युरा सावित भएको छ । प्रदिप गिरीले मधेस र मधेसीको अधिकारको लागि सर्वाधिक लेख्ने , वोल्ने र लड्ने नेताको रुपमा आफूलाई चित्रण गरी मधेसीको मत मागे पनि मधेस आन्दोलनमा प्रथम सहादत दिने रमेश महतोको भूमिमा संघीय समाजवादी फोरमको आफ्नै उम्मेदवार भए पछि नेता गिरीको त्यो तर्क पनि फिका र वजनविहिन देखिने भएको छ ।
विना कुनै परिश्रम र तनाव निर्वाचन जित्ने धोकोमा रहेका वाम गठवन्धनलाई भने प्रदिप गिरीको उपस्थितिले चिन्ता पैदा गराएको छ । राजनीतिमा नेता , चिन्तक र राजनैतिक विश्लेषक जस्ता उपमा जोडिएका प्रदिप गिरीलाई चुनावी राजनीतिमा जादुगर र चमत्कारी व्यक्तित्वको रुपमा पनि हेरिन्छ । उनलाई निर्वाचन जिताउन अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरु पनि तन, मन र धन लिएर उभिने चर्चा पनि सिरहामा चलेको छ । प्रखर वाक पटुताका धनी गिरीले मतदाताको मानसिकता वदल्न सक्ने क्षमता राख्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु भने हौसिएका छन् । पत्रकार अर्जुन थपलिया भन्छन्, ‘सिरहा क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेस वाम शक्तिवाट तर्सिएको र वाम गठबन्धन प्रदिप गिरीको क्षमता र ओजवाट झस्किएको अवस्था छ ।’